ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁) ရက်မြောက်နေ့ (၇. ၁၂. ၂၁၀၈) | Pyithu Hluttaw
(က)-နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် နှစ်(၃၀) အငှားဖြင့်ချထားပေးသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းဧကပေါင်း မည်မျှရှိသည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ခ)-မြစ်သားမြို့နယ် ဝါသီးနှံသုတေသနခြံရှိ အဆောက်အဦဟောင်းများအား အကြီးစားပြုပြင်မွမ်းမံပြီး လိုအပ်သော အဆောက်အဦသစ်များ ထပ်မံဆောက်လုပ်၍ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံကျောင်း ဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-တောင်သူလယ်သမားများသည် Great Wall Tomorrow Hi-tech Agriculture Co.,Ltd. ၏ (GW-1 Hybrid Pearl Rice Seed) စပ် မျိုးစပါးမျိုးစေ့ကိုယူပြီး ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးခဲ့ရာ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို မည်သို့ ကုစားပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-သန္နီမြို့၊ မိုင်းယန်းရွာနှင်‌့ လုံမောက်ကျေးရွာ ရေရရှိရေးအတွက် သဘာဝရေထွက်နေရာမှ ၎င်းကျေးရွာ များသို့ ရေသွယ်တန်းပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်း သည့်မေးခွန်း
(င)-ဈေးကွက်အတွင်းရှိ တောင်သူလယ်သမားများ၏ သွင်းအားစုများဖြစ်သော ပိုးသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေး၊ မျိုးစေ့နှင့် မြေဆီအမျိုးမျိုးတို့၏ အရည်အသွေးကို မည်သို့စစ်ဆေးခွင့်ပြုနေသည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေး အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိသော အငြင်းပွားမှု စစ်ဆေးသောအမှုတွဲကို သက်ဆိုင်သူများ ကူးယူခွင့်ရှိ/မရှိ သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရေချိုအင်းများ၏ အင်းနယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ချက်မြေပုံများကို တိကျမှန်ကန်စွာ ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁) ရက်မြောက်နေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်